Amaanka saraakiisha dowlada oo halis sii gelaya & debadbax Muqdisho ka dhacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
12th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Xilli uu sii xumaanayo amaanka magaalada Muqdisho oo ay sii badanayaan weerarada lagu beegsanayo mas’uuliyiinta dowladda ayaa waxaa maanta degmada Xamar Jajab ka dhacay dibadbax looga horjeeday falalka amaan darrada ah.
Dadka dibaxa sameynayay ayaa dalbanayay in heyadaha amaanka ay gacan adag ku qabtaan dadka umada Soomaaliyeed u diidan nabada iyo hormarka.
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca ariamaha buslhada dagmada Xamar Jajab Axamed C/laahi Samoow oo lahadlay warbaahinta ayaa Sheegay in shacabka Muqdisho aysan u dulqaadan Karin in ay ku dhex dhuuntaan Alshabaab.
Guoomiyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyed in ay garab istaagan laamaha Ammaanka oo ay gacan adag ka geystaan ka hortaga falalka gurrcan oo ay malaagayan dadka kasoo horjeeda nolosha.
Degmada Xamar Jajab ayaa shalay lagu weeraray xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, waxaana weerarkaas ku dhintay darawalkiisa iyo mid ka mid ah ilaaladiisa.
Shalay Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay labo Weerar oo mid kamid ah la doonayay in lagu dilo Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ,inkastoo uu weerarkaasi ka badbaaday xildhibaanka hasa yeeshee lagu dilay labo nin oo midna darawal u ahaa Xildhibaanka midna ilaalo u ahaa.
Weerarka kale ayaa shalay lagu dilay Taliyihii Waaxda Socdaalka ee garoonka Aadan Cadde Marxuum Maxamuud Cabdi Caddow “Dhabareey”.kadib markii ay kooxo hubeesan Rasaas Culus ku fureen Gaari uu watay xili uu marayay Isgooska KM-4 ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale saakay Magaalada Muqdisho ka dhacay Weerar la qorsheeyay kaa oo lagu dilay Gudoomiye kuxigeenkii Dhinaca Arimaha Bulshada ee Maamulka Degmada Howl-Wadaag Yuusuf Hilaal.
Sadaxdan Weerar ayaa dhamaantooda ahaa mid isku nuuc u dhacay, waxaana fuliyay kooxo hubeesan oo gawaari watay kuwaa oo gaariga ay wataan ku horjarayay gawaarida ay wateen Masuuliyiintan kadibna rasaas ku furayay.